Okpomoku nke ndi mmadu na-acha uhie uhie
Nkọwa:Mgbidi Mmiri nke Mmiri,Okpomọkụ nke anyanwụ na-acha ọkụ,Ogige mmiri na-adịghị ekpuchi,Ogige Ngwá Agha Na-acha Ncha,,
Mgbidi Mmiri nke Mmiri,Okpomọkụ nke anyanwụ na-acha ọkụ,Ogige mmiri na-adịghị ekpuchi,Ogige Ngwá Agha Na-acha Ncha,,
Home > Ngwaahịa > Ìhè anyanwụ > Mgbidi Mmiri nke Mmiri
Ngwaahịa nke Mgbidi Mmiri nke Mmiri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Mgbidi Mmiri nke Mmiri , Okpomọkụ nke anyanwụ na-acha ọkụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ogige mmiri na-adịghị ekpuchi R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ejiri Mgbaji Eji Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ekwupụta
Ike ntanetị ọkụ nke na-amụba ọkụ ọkụ, nwere ike iji ike ọkpọka na-ebuba chaja ekwentị mobile 5V. N'èzí, a pụrụ imepụta nchọpụta, na-ebuba ekwentị. Aka na-eweta mberede . A na-atụle ọhụụ nke aka na aka 120 revolutions kwa nkeji. Ọsọ ọsọ ọsọ, ike...
China Mgbidi Mmiri nke Mmiri Ngwa
Solar mara ụlọikwuu ING ọkụ na-eji na-enye ìhè na ha mara ụlọikwuu, mmenyenjo pụọ na ụmụ anụmanụ, na-egosi na ọnọdụ nke ha mara ụlọikwuu, na-enye obere ọkụ. Solar mara ụlọikwuu ING ọkụ dị: fechaa na mfe na-ebu. Ike ikpo ọkụ, ogologo ndụ, ihe ngwọta dị irè nke ọma, ọ bụghị ọkụ, ìhè dị nro na enweghị nlele nchedo anya.
Ntube mmiri, ihe niile na-ekiri; Igwe ọkụ abalị, ọkụ ọkụ azụ abalị;
Ebe ngbacha, ọkụ ọkụ; Nkwado ụgbọ ala, ebe nchekwa ụgbọala, wdg. Nhazi ahụ mara mma na akwụkwọ ngwaahịa, tinyekwara n'ụlọ ahụ dịkwa ezigbo mma mma.
E nwere ọtụtụ ụdị nke Solar mara ụlọikwuu ING ọkụ. Ugbu a, anyị na-ejikarị iji ìhè oyi na-azọpụta nchekwa ọkụ na bọlbụ bọlbụ. Nke mbụ bụ ụdị batrị. The rechargeable maa ụlọikwuu ìhè mepụtara FIZZ Global nwere ike ebubo n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla, gụnyere ụgbọ ala Nchaji, ike ọkọnọ Nchaji na anyanwụ panel Nchaji. Ọ na-adaba maka nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Okpomọkụ nke anyanwụ na-acha ọkụ
Mmiri Mmiri nke Mmiri